MICROBIOT-KA LABA-JEER: BEERASHADA IYO DARYEELKA, SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Microbiot-ka laba-jeer: beerashada, beeritaanka, daryeelka
Buunshaha microbiota ee qotodheer waa mid aad u caan ah beerta. Tani qurux badan, jilicsan ee baadiyaha taabashada waa qurux badan oo jardiinooyin badan. Intaa waxaa dheer, ma aha wax adag in la daryeelo oo dhan, waxayna xajisaa xaafadda oo ay urayaan cirbadaha. Laakiin ma beerta beerta kasta ogyahay sida loo daryeelo baadiyaha this. Aan aragno nooca cawska iyo sida loo daryeelo isaga.
Sharaxaad iyo noocyo kala duwan
Microbiot-ka laba-lab ah - geedo waaweyn oo leh qoyskooda.
Buundada dhererka kama badna 1 m, oo ballaadhkuna wuxuu gaaraa 7 mitir. Waxay inta badan dhacdaa Ruushka. Lagu qoray liis dhif ah Buugga Cas. Waxaa la ogaaday B. K. Shishkin 1921. Caleemaha laanta baadiyaha soo baxay. Laamuhu waxay gaareen ilaa 2 mitir, laakiin ma sarrayso, waxay ku faafaan hoosta hoose ee dhulka. Xilliga jiilaalka, laamaha microbiota waxay noqdaan bunni. Warshadu waxay kicisaa abuurka oo ku jirta 5-6 mm dherer. Kuwani waa kuwo aan qabyo ahayn, laakiin aan u dulqaadan karin qadar weyn oo cusbo ah ee ciidda waxayna u baahan yihiin waraabin joogto ah oo ku xoortay geedihii.
Ma taqaanaa? Microbiota waxay ku nooshahay ilaa 250 sano.
Waxaa jira noocyo badan oo mikrobiota ah. Aynu sii degganaano labo ka mid ah - Jacobsen iyo Goldspot.
Jacobsen waa mikrobiota isku dhafan. Mudo 10 sano ah, dhererkeedu wuxuu yahay 40 cm Cirifka sare ee qaangaarka weyn wuxuu noqon doonaa 60 cm, dhexroorka baadiyaha kama badnaan doono 1.5 mitir. Tani noocyo badan oo microbiota ah waxay leedahay taaj furan. Beerto yar ayaa koreysa. Markay sii weynaadaan, laamaha geedku wuxuu bilaabaa inuu leexo. Qabo midab guduudan. Bushka si tartiib ah ayuu u koraa. Cirbadaha ilaa 2 mm dhererka, wuxuu leeyahay midab cagaaran. Haddii aad xoqdo gacmahaaga, waxaad dareemi kartaa wax gaar ah, oo kaliya dhadhan ahaan. Warshadda uma dulqaadan karo carrada acidic ah. Ma jeceshahay iftiin badan. Ilaalinta dabka ayaa loo baahan yahay.
Evergreens ee qaabeynta muuqaalka ayaa noqon doona muuqaal dhab ah. Midka ugu haboon ee degaannada magaalada ku xeeran waa: spruce, honeysuckle, caws, juniper, qoryaha, sanduuqyada, geed, yew, thuja.
Nooca labaad ee geed - Goldspot. Kala duwanaanta mikrobiota waxay ka weyn tahay qiyaasta Jacobsen. Da'da toban jir, dhirta ayaa gaareysa 0.5 m dhererka iyo 150 cm dhexroor. Dhamaadka dhinacyada cirbadaha ayaa leh shukulaato. Qaybta ugu weyn waa cagaar. Cones oo qiyaas ahaan u dhexeeysa 30 illaa 60 mm waxay leeyihiin hal shinni oo kaliya, taas oo horay u soo dhacaysa bilowga Sebtembar. Xididdadu waxay aadaan meel hoose oo dhulka hoostiisa ah. Wuxuu jecel yahay hooska wuxuuna u baahan yahay hoy ka dabaysha.
Miro-geed micno-yari waxay ku dhacdaa dalool khaas ah, iyadoo ku xiran cabbirka xididka. Qoorta xididku waa inaysan geli karin ciidda in ka badan 1-2 cm. Qeybta hoose ee godka, waxaad u baahan tahay inaad dhigto 0.2 m oo dheecaan ah, taas oo ay ka wanaagsan tahay in la qaato xabbad dhagax ama dhagax la jajabiyey. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ku darto ciid iyo dhirta. Xayawaannada waxaa lagu koray fogaan ah ugu yaraan 1 mitir oo ka timid dhirta deriska ah. Haddii la isku daro, masaafada u dhaxaysa dhirta waa in ay ahaataa ugu yaraan 0.5 m Ka dib markii la beero, dhulka waa in lagu dhejiyaa xiirida alwaax ama peat ilaa 0.1 m.
Waraabinta mikrobiota waa in si joogto ah loo qabtaa. Waraabinta geedo waa marka kaliya ee lakabka sare ee dhulka la qalajiyey. Maqnaanshaha roobka, microbiota waxay u baahan tahay in la waraabiyo laba jeer toddobaadkii. Ka dib markii cusboonaysiinta roobabka dabiiciga ah, baahida loo qabo waraabin xoog leh ayaa maqnaan doona. Intaa waxaa dheer, geedka waa in la buufiyaa fiidkii kasta. Ku waraabinta rego, waxaad u baahan tahay inaad maalin kasta ku shubto 5 ilaa 7 litir oo biyo ah nuqul kasta. Rusheynta ayaa sidoo kale loo baahan yahay. Waxaa badanaa lagu sameeyaa guga iyo xagaaga waxaana la qabtaa subaxa iyo fiidkii. Waxay u fiicantahay in lagu waraabiyo sanadka ugu horreeya ee nolosha baadiyaha maalin kasta - taasi waxay ka caawisaa mikrobiota in la nadiifiyo wasakhda iyo boodhka.
Microbiota koraya waa mid aan macquul ahayn iyada oo aan bacriminta. Waxaad isticmaali kartaa xal mullein ah.
Waa muhiim! Ha isticmaalin digada si bacrimiya microbiota: waa waxyeello geedka.
Sidoo kale isticmaal bacriminta macdanta, laakiin caqli ahaan: microbiota waa mid aad u xasaasi u ah qaabka bacriminta. Halkan waxaa ku qoran xeerar yar oo ku saabsan sida aad ugu baahan tahay inaad ku quudiso dhirta:
Ha isticmaalin nitrogen, maadaama aysan dhirta awoodi doonin inay ku noolaadaan xilliga jiilaalka oo u dhinta: caleemaha waxay noqon doonaan huruud iyo jimicsi badan oo chlorosis ah.
Sidoo kale ku xoortay geeddisocodka ka hortaga digada.
Laakiin compost at heerka of 3-5 kg ​​halkii 1 sq. Km. m waa la soo dhaweyn doonaa.
Sidoo kale for quudinta dhirta this ayaa la cadeeyay biohumus.
Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in lagu quudiyo mikrobiotka leh mareeyn. Haddii kale, chlorosis way dhici kartaa.
Intaa waxaa dheer, geedka ma u dulqaadan walaaca: caleemaha ma qummanaan karaa ka dib jiilaalka.
Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la isticmaalo magnesium. Microbiotas, sida dhirta kale, waxay u baahan tahay "neefta", laakiin sida eefedro kuma jirto caleemo. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in lagu kordhiyo dhirta qaabka dhirta. Iyo magnesium waxaa ku jira kaliya nukleus of molecule chlorophyll, taas oo macnaheedu yahay in ay ka caawin doonaan geedkii in formation of photosynthesis. Qodobkan waa in lagu siiyaa qaab burka dolomite ama Bacriminta oo ku jira magnesium.
Aan microbiota nala helno waxyaabo farabadan.
Ka saar dufanka nitrogen ka soo jimicsiga.
Isticmaal magnesium sida ugu weyn ee dharka ugu sareeya.
Microbiota waxay u baahan tahay in la quudiyo laba jeer sannadkii. Labiska ugu horeeya waxaa ugu wanaagsanaa bisha May, kan labaad - bisha Agoosto, si uu geedka loogu diyaariyo jiilaalka.
Bishii May, waxaa ugu wanaagsan in la bacrimiyo geedkii la Uniflor Bud - waxaa ku jira magnesium, ku yaraanta nitrogen iyo waxyaabo badan oo raad raac ah. Uniflor Cactus sidoo kale waa ku habboon - waxyaabo kale, waxaa ku jira kalsiyum, iyo walxo badan oo la mid ah Uniflor Buton.
Si aad u diyaariso xalka, qaado 2-3 ml oo bacriminta, lagu milo 3 litir oo biyo ah iyo ku shub dhulka ku wareegsan geedka. Markaad isticmaasho rusheynta, qaado qadarka isku midka ah ee labiska, laakiin lagu milo 10 litir oo biyo ah, haddii kale waxaa jiri doona gubasho beeraha. Bishii Agoosto, xoojinta dhirta iyada oo la adeegsanaayo Uniflor Micro. 0.5 ml ee daroogada ayaa la qaataa geedka. Si loo qiyaaso qiimaha waa adag tahay. Si aad u qiyaasto, samee aalkeeda hooyada: qoyso bacrimin 10 jeer, ka dibna diyaariso xalka shaqada. Biyo warshad, ogaanshaha in hal nuqul uu u baahan yahay 5 ml of xal stock.
Aad bay muhiim u tahay in la dabciyo carrada halkaasoo xididdada microbiiyada ay been yihiin. Looshintu waa lagama maarmaan in la burburiyo xakamaynta ciidda oo laga saaro xididada dhirta waxyeellada leh. Waxaa lagama maarmaan ah in la dabciyo si taxadar leh, si aanay u dhaawacin xididdada geed. Loosening waxaa lagu sameeyaa guga isla marka uu barafku dhalaalayo oo dhulku ka soo baxo qoyaan badan. Intaa ka sokow, loosening waa la fuliyaa sida loo baahan yahay - marka wadajirta dhulka. Inta badan loosen inta lagu jiro xilliga daaqsinka.
Waa muhiim! Qoto dheer ee dabacsan waa in aan ka badneyn 3-5 cm.
Daraasadku waa lagama maarmaanka u ah xakamaynta cawska: waxay iftiin ka qaadaan baadiyaha, aagga koritaanka iyo walxaha waxtar leh ee dhulka. Intaa waxaa dheer, cawska waxay jecel yihiin horumarinta cudurrada dhirta, iyo sidoo kale muuqaalka kaneecada waxyeello on. Isticmaalka kiimikada waa aan loo baahnayn. Waxaa loo isticmaalaa kiisaska xaaladaha degdegga ah.
Duuduubyo ha u dulqaadanin iskubeddel aan lahayn astaamo. Isu-tallaalidda isticmaalida caleemaha jiifa carrada. Gooynta waxaa lagu qaadaa xajmiga 8-10 cm, waana lagama maarmaan in la isticmaalo kiciyeyaasha abuurista rootiyada, sida "Kornerost", "Heteroauxin", "Kornevin". Waxa kale oo lagama maarmaan ah in lagu hayo heerkulka iyo qoyaanka. Xilliga dayrta, qiyaastii 90% gooynta ayaa lagu shubi karaa shkolka, maaddaama ay sameeyaan xasaasiyad wanaagsan.
Taasi si fiican u baadho, waxay u baahan tahay in la diyaariyo jiilaalka. Si arrintan loo sameeyo, dhammaadka dayrta waa in si taxadar leh loo waraabiyo. Waxaad u baahan tahay inaad ku shubto ugu yaraan laba baalin hoos mareen kasta. Xilliga jiilaalka, barafka ayaa ku duubay mikrobiota waxay u baahan tahay in la nadiifiyo, maadaama ay jebin karto laanta geedka.
Daryeelka microbiotka ee loo baahan yahay waxaa ka mid ah bacriminta iyo qashin qubka. Ka dib laba sano oo nolol ah, dhirta waxaa lagu dabaqay bacriminta Universal Kemira iyadoo lagu xisaabinayo 20 g / sq. M. Waxaad sidoo kale ka sameyn kartaa nitroammofosku. Bacriminta waxaa lagu dabaqaa 1 jeer 2 sano. Baahi si aad u biyo u dhasho. Celcelis ahaan, waxaad u baahan tahay inaad ku shubtid 6 litir oo biyo ah baadiyaha. Waxaad isticmaali kartaa rusheeyaha habeenkii. Qalabka hawada ayaa sidoo kale loo isticmaalaa. Loosinta of stock yar yar waxaa lagu fuliyay lahayn qoto dheer ka badan 6 cm, iyo duurka ka weyn oo aan lahayn qoto dheer ka badan 15 cm. Buunshuhu wuxuu u baahan yahay jaridda. Mikrobiot Mulch leh peat ama chips ilaa 10 cm isla markiiba ka dib markii laga beerto. Si loo badbaadiyo beeritaanka qorraxda, waa in lagu daboolo lakabka 15 cm caleemo qalalan. Microbiota kama cabsanayaan cayayaanka waxyeello leh, mana ka baqdo cudurada.
Microbiota faafin by gooyn iyo abuur. Seeds u bislaadaan xilliga dayrta. Dhibaato u hesho. Intaa waxaa dheer, waxaan u baahan nahay xaalado gaar ah biqilka. Seeds waa inay noqotaa mid cusub, sababtoo ah 1-2 sano kadib waxay luminayaan biqilka. Waxaa la beeray ka hor xilliga qaboobaha, ama waa lagama maarmaan in la kala saaro dhawr bilood oo ah heerkulka wanaagsan ee ugu hooseeya.
Inta lagu jiro dhalmo ee microbiota, qiyaastii 1/3 ee gooynta xidid by gooyn. Jarida waxaa la sameeyaa dhammaadka guga. Waxaa la soo saaraa adoo kala soocaya saqafyada oo leh gabal gabal ah oo ka soo baxa dhirta hooyada. Laga soo bilaabo dhinaca jilifka waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo jarida iyadoo la adeegsanayo "Kornevina". Marka xigta, baadiyaha yar ee xiga waxaa lagu beeray substrate si 1/3 oo ka mid ah dhulka ku yaal. Xagga sare ee jirku wuxuu ku xiran yahay karti ama goglan yar-yar. Waxaad dhigi kartaa gooyn si kala duwan. Si arrintan loo sameeyo, qaado filim mugdi ah iyo guntin qoyan. Kala soocay digaagaha hooyada ayaa ku fidiya cawska (gabal dhoobo). Dhanka kale waxay ku faaftaa gabadka. Dheeraad ah, waxaas oo dhan waa la isku dhejiyay oo ku xiran yahay xadhig labada dhinac ah. Mid ka mid ah dhammaadka "lakab" waxaa la jarjarey 2.5 cm oo ku jirta weelka biyaha, dusha sare ee "sandwich" waxaa lagu duuduubay filim si ay u haboonaato. Waxaa muhiim ah in filimku aanu lahayn godad (haddii kale biyo ayaa uumi-baxaya). Ilaa dhamaadka Sebtembar, dhammaan duurka dhalinyarada waa in lagu beeraa dhulka.
Ma taqaanaa? Isku xidhaha microbiota juniper wuxuu leeyahay lab iyo dheddig laboodka laga soo bilaabo dhalashada, laakiin da'da jinsigeeda isbeddelka dumarka.
Microbiota ee qaabeynta muuqaalka ayaa leh door khaas ah. Waa baadhitaan dhab ah qarnigii 20aad ee warshadan. Cabbirka beertu waa yar yahay dhererka. Laakiin kharashka dhererka geedku waa qeyb muhiim ah oo beerta ah. Microbiotka ayaa si quruxsan ugu biiriya ubaxyada iyo geedaha. Beertu waxay ka buuxsantaa nacalka irbadaha geedaha. Cirbadaha dhirta ayaa wacan inay taabtaan oo aad u jilicsan yihiin. Waxaa jira dhowr nooc oo naqshad beerta ah oo la adeegsanayo microbiota. Aynu eegno.
Ruushka. Microbiota waxaa lagu beeray kaydka, oo ku hareereysan bjørk iyo bawdada. U dhawaansho waxay noqon kartaa dabeecad ama barbaarin carruurta. Sidoo kale halkan waxaad timaadaa geedo waaweyn iyo sariiraha ubaxa. Dhammaan tani waxay xasuusineysaa guryaha waayeelka ee Ruushka ee qarnigii XYII-XIX.
Qaabka Ingiriisiga. Halkan, geedkan waxaa loo isticmaalaa meel kasta: meelo caws ah, qaabka dhaaqada iyo buuraha dhagaxa. Aragtida iyo midabka beerta waxay hoosta ka xirtaa aristocracy-ka Ingiriisiga ah, sidoo kale waxay abuurtaa muuqaal muuqaal muuqaal leh.
Waxaad ku beeri kartaa beeritaanka wadooyinka, waxay si fiican u xoojineysaa dhadhanka milkiilayaasha beerta. Sidoo kale, baadiyaha ku habboon dhagxaan dhagax ah iyo qurxinta beerta dhagaxa: microbiota waxaa lagu beeray dhoobada dhagaxyada, taas oo abuuraysa muuqaal dabiiciga ah ee "beerta".
Bushkuna si fiican ayuu u helaa dadka kale. Sidoo kale ku habboon waa warshad qolfasal ah sida periwinkle.
Isku darka microbiota iyo beeraha kale ayaa sidoo kale noqon kara mid xiiso leh. Microbiota waxaa si fiican ugu weheliya dhoobada - thujas, juniper iyo sprouts. Badanaa beeritaanka wuxuu ku yaalaa dhinacyada isboortiga. Geedka dhirta ku dhaji waddooyinka keena guriga ama beerta. Waxaad ku beeran kartaa geed geed leh geed cuur ah oo cuf ah - isku dhafkaasi wuxuu u muuqdaa wax aan la yaabin. Xitaa ka sii fiican waa isku darka mikrobiota iyo ubax geedaha sida lilac, phlox, iyo shuban. Cayaartan midabkiisu wuxuu ka dhigayaa midab midab gaar ah.
Microbiota waa baadiyaha quruxda badan ee quruxda badan, oo aan qabin daryeel. Waxyaabaha kala duwan ee ay la socoto waxay abuuri doontaa qaab shakhsi ahaaneed oo beert ah.